Mareykanka: Al-shabaab ayaan ku dilnay duqaymo kadib weeraradii oo la kordhiyay – Radio Daljir
Mareykanka: Al-shabaab ayaan ku dilnay duqaymo kadib weeraradii oo la kordhiyay
Febraayo 9, 2019 7:04 b 0
War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska ciidamada Mareykanka Qaaradad AFrika ee Africom ayaa lagu faah faahiyay duqeymo xagga cirka ah oo lagu qaaday xarumo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Alshabaab ee ku yaala Gobolka Shabeelada Hoose.
Africom ayaa sheegtay in iyagoo kaashanaya Ciidamada Soomaaliya ay duqeymahaasi ka fuliyeen deegaanada Gendershe iyo Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose,kuwaasi oo khasaare lagu gaarsiiyay Alshabaab, 48 saacadood ee la soo dhaafay.
Weeraradaasi oo dhacay 2 maalmood oo is xig xigtay ayaa waxaa lagu dilay ilaa 15 xubnood oo katirsan kooxda Alshabaab,sida lagu sheegay qoraalkaasi ka soo baxay Africom.
Ugu dambeyntii qoraalka ayaa lagu sheegay in howlgalka Africom uu sii wadayo howlgaladaasi ilaa amaanka dalka uu ka soo wereego AMISOM laguna wareejiyo dowladda Soomaaliya,ilaa laga gaarana ay isticmaali doonaan awoodkasta oo ay ku badbaadin karaan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato xoogan ku qaba maleeshiyada Alshabaab.
Carruur daawo la’aan ugu geeriyootay Venezuela
Jamhadda ONLF ee Soomaali Galbeed oo hubka dhigtay, nabadna qaadatay